Ndeapi masimba emagetsi ekuhaya: iwo akanakisa matipi | Green Renewables
Tichaona riinhi nderipi simba rechiedza rekuhaya, zvakakosha kuti uzive mashandiro ese pairi kuti usatipedzera uye uve nemari isingakoshi kana kuperevedza uye izvo zvinotungamira zvinowanzo svetuka. Kuziva iro simba rechiedza rekuhaya kwakakosha kushandisa chete padanho redu rechiedza uye kupambadza mashoma magetsi.
Naizvozvo, muchinyorwa chino tichaenda kukuudza zvese zvaunoda kuti uzive iro simba rechiedza rekuhaya.
1 Chii chinonzi simba remagetsi
2 Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve isimba ripi remwenje rekuhaya
3 Mitemo yekudzidza iro simba rechiedza rekuhaya
4 Ndiani uye sei simba rinosarudzwa
Chii chinonzi simba remagetsi
Kuti tidzidze kuti simba rechiedza rekuhaya chii, isu tinofanirwa kutanga taziva zvinoreva pfungwa iyi. Simba ndiyo huwandu hwesimba rinogadzirwa kana kudyiwa pachikamu chimwe nechimwe chenguva. Ino nguva inogona kuyerwa mumasekondi, maminetsi, maawa, mazuva ... uye simba rinoyerwa mumajoules kana watts.
Simba iro rinogadzirwa kuburikidza nemaitiro emagetsi rinoyera kugona kuburitsa basa, ndiko kuti, chero mhando ye "kuyedza". Kuti tinzwisise zviri nani, ngatiisei yakapusa mienzaniso yebasa: kudziyisa mvura, kufambisa mashizha e fan, kuburitsa mweya, kufamba, nezvimwe. Zvese izvi zvinoda basa rinokwanisa kukunda anopikisa masimba, masimba akaita semagiravhiti, simba rekukonana nepasi kana nemhepo, tembiricha yatovepo munharaunda ... uye iro basa riri muchimiro chesimba (simba remagetsi, kupisa, mechina ...).
Hukama hwakasimbiswa pakati pesimba nesimba ndizvo mwero unoshandiswa simba. Ndokunge, kuyerwa kwesimba mumajoules anodyiwa pauniti yenguva. Joule yega yega inodyiwa pasekondi imwe watt (watt), saka ichi ndicho chikamu cheyero yesimba. Sezvo watt iri diki kwazvo unit, kilowatts (kW) anowanzo shandiswa. Ukaona bhiri remagetsi, zvekushandisa nezvimwe zvakadaro, zvinouya kW.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve isimba ripi remwenje rekuhaya
Mimwe yemibvunzo inowanzo bvunzwa kana zvichikosha kuti uzive kuti nderipi simba remwenje rekuhaya rine chekuita ne frequency iyo inotungamira inosvetuka kana paine kushandiswa kwakasiyana kupfuura kwakajairwa kana nekuti hakuna mwenje kana tikabatanidza akawanda magetsi zvishandiso panguva imwe chete.
Uye ndezvekuti upindure iyi mibvunzo yese zvakafanira kutarisa kuwanda kwemidziyo yemagetsi iri mumba medu. Inofanirwa kutariswa kuti simba remagetsi rinoenderana nezvinhu zvakawanda. Kuva neimba hombe kana diki hakuna kukosha, kubvira zvinokwanisika kugara mune imwe imba yakakura zvine michina mishoma. Izvo zvinopesana zvinogona zvakare kuitika. Imba inogona kunge iine midziyo yemagetsi inokwana uye nenzvimbo diki uye inofanirwa kuve nemagetsi akawanda.
Kuti uzive simba rechiedza rekuhaya, iwe unofanirwa kuziva huwandu hwemidziyo yauinayo mumba mako uye kana uchizoishandisa panguva imwe chete kana kwete.
Mitemo yekudzidza iro simba rechiedza rekuhaya
Tiri kuenda kunoona kuti ndeipi yekutanga uye mikuru mirawo inofanirwa kutarisirwa kuti tizive isimba rechiedza rekuhaya.
Iyo yepamusoro iyo chibvumirano chemagetsi emagetsi, yakakwira iyo yakatarwa huwandu hwunofanirwa kubhadharwa. Ichi chinhu chakakosha kufunga nezvacho sezvo tisingakwanise kupfuura magetsi emagetsi sezvo tichizobhadhara yakawanda. Pfungwa ndeye kudzidza zvakawanda kana kushomeka iyo mari yauchazove nayo uye nekuhaya izvo zvinodikanwa kugutsa zvakataurwa zvemagetsi zvinoda.
Kuva nesimba shoma rakabvumirwa hazvireve kuti tichava nemari yakawanda. Zviripachena kuti kwese kW iwe yaunodzika pasi mukukwikwidza iwe ucha chengetedza makumi mashanu euros pagore. Nekudaro, zvese kana chengetedzo zvinonyangarika kana ukakundikana kushandisa zvishandiso zvinoverengeka panguva imwe chete. Hapana munhu anoda kushandisa nguva yese kuenda kubhokisi rekupinda sezvo ICP ichiramba ichisvetuka. Unopererwa nechiedza nekubatidza ovhoni panguva imwe chete yaunoisa muchina wekuwachisa uye izvi zvinogona kunyatsogadzikana kana zvikaitika kazhinji.
Kana izvi zvikaitika, iwe unofanirwa kuwedzera iro chibvumirano simba, kunyangwe kana richinditorera ini imwe mari. Kuchengetedza kudzikiswa kwesimba kwechibvumirano kunogona kudhura kana ukasazviongorora nenzira kwayo.
Ruzivo isimba uye kunyangwe iwe uchikwanisa kusarudza zvekuhaya, zvakakosha kuti uve neruzivo. Pane muganho wakatarwa nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza kana uchiwedzera simba. Sezvinei, kwete ese magetsi emagetsi muzvivakwa zvese nenzvimbo anotsigira masimba akakwirira. Kana iwe uchida zvinopfuura iwo muganho unobvumidzwa, iwe uchafanirwa kugadzirisa zvachose kuiswa. Zvikasadaro, tsaona dzisingadiwe dzinogona kuitika.
Kana zvasvika pakudzikisa simba, newewo une izwi rekupedzisira. Nekudaro, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti kana iwe ukatadza kusvika pasimba, iwe ndiwe uchave nekutambura kusagadzikana kwese nezvazvo. Iwe unogona kudzikisa kana kusimudza simba sezvaunoda, sekureba sekuwanda kwe0.1 kW kunowanikwa. Kana pakupedzisira uchipedza kudzikisa simba rakabvumiranwa, mutengo wekusimudza zvakare zvinoreva kuti mari dzese dzakashandiswa hadzina kushandiswa.
Ndiani uye sei simba rinosarudzwa
Vatengi ndivo vari pamusoro pekubvumirana nekambani iri pasimba rekupinzwa. Chinhu chakasarudzika ndechekuti iyo kambani pachayo inoita kurudziro zvichibva pakuisirwa kwayo uye nhamba yemidziyo. Mukupedzisira, iwe ndiwe une izwi rekupedzisira uye iwe unogona kuhaya iyo mari yaunoda. Muparadzi anongobvumirwa kungogamuchira shanduko imwe musimba remagetsi pagore, kunyangwe ichishandurwa zvinoenderana nezvaunoda Zviripachena kuti haugone kugadzirisa simba rayo rakabvumirwa mwedzi wega wega.
Kuti uzive kana wanga uchihaya, pane hunyengeri husingambokundike. Batidza zvinhu zvese zvemagetsi zviri mumba mako panguva imwe chete. Kana pakati pemidziyo iyi ukawana ovhoni, mhepo inodziya uye yekuchenesa, uye kunyangwe ICP isingasvetuke, pamwe ungangove une simba rakawandisa. Nguva dzaunofanira kubatanidza zvakanyanya kana zvese zvigadzirwa zvemagetsi panguva imwe chete mumba mako zvishoma kana kushaya basa. Iwe haufanire kunge wakagadzirira icho. Iwe uri kubhadhara chimwe chinhu chausina kumbobvira kana chausingamboshandisa. Zvese izvi zvinozoonekwa mumutemo wemagetsi.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda pamusoro pesimba ripi remwenje rekuhaya imba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Simba rekuchengetedza » Kumba Economics » Isimba ripi rechiedza rekuhaya